Monday June 24, 2019 - 10:05:08 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xisbiga uu madaxda ka yahay Rajeb dayib Erdogaan madaxweynaha xukuumada dabadhilifka Turkiga ayaa markale guuldarro ballaaran kala kulmay doorashooyin ku sheegyo laga qaban qaabiyay magaalada ugu weyn wadanka.
Wararka ka imaanaya Turkiga ayaa sheegaya in lasoo gaba gabeeyay codbixintii ka dhacday magaalada Isbtanbuul waxaana laga adkaaday Bin Cali Yaldariim R/wasaarihii hore ee dowladda Turkiga.
Doorashada waxaa ku guuleystay Nin lagu magacaabo Imaam Ooglo oo ka socda Xisbiga shacbiga Jamhuuriga mucaaradka ah, duqa magaalada Istanbuul iyo hoggaaminta dowladda hoose waxay ka baxday gacanta Erdogaan.
Doorashooyinkii dhacay oo ay ka qeyb galeen inkabadan 10 milyan oo qof ayaa la sheegay in guuldarro weyn ay kasoo gaartay xisbiga talada haya, kooxaha mucaaradka ayaa helay 53.6% halka xisbiga talada haya uu helay 45.4%.
Warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegtay in guuldarrada Erdogaan uu kala kulmay magaalada Istanbuul ay banaanka soo dhigayso dib udhaca dhanka siyaasadda ah ee usoo galay xisbiga isku magacaabay horumarka iyo cadaaladda oo 15-kii sanadood ee lasoo dhaafay Turkiga maamulayay.
Doorashooyin ku sheegyada ka dhacay magaalada Istanbuul ayaa ahaa kuwa ku celis ah kadib markii dowladda Turkiga ay ka biya diiday doorashooyinkii dhacay bishii Maarso ee lasoo dhaafay xilligaas oo kooxaha mucaaradka ay ku guuleysteen doorashooyinkii dhacay.
Magaalada Istanbuul waa magaalada ugu weyn wadanka uguna dhaqaalaha badan inkastoo aysan aheyn caasimadda hadane waxaa ku yaal inta badan xarumaha dowladda dabadhilifka Turkiga waxayna magaalada isku xirtaa qaaradaha Aasiyo iyo Yurub.
Dagaal dad ku dhinteen oo ka dhacay duleedka magaalada Berbera.
Wararkii Ugu Dambeeyay ee Khasaarihii ka dhacay Qaraxii Muqdisho iyo dowladda Turkiga oo ka hadashay.